ဥရောပမှာတော့အကောင်းဆုံးရရှိနိုင်ရန်အိမ်ခေါင်မိုးစာဆိုင်များနှင့်Café | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ဥရောပမှာတော့အကောင်းဆုံးရရှိနိုင်ရန်အိမ်ခေါင်မိုးစာဆိုင်များနှင့်Café
ခင်ဗျားကြိုက်တဲ့လူစားမျိုးလား လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်ဘတ်စ်ကားခရီးစဉ်? သို့ဖြစ်လျှင်ဤ post ကိုသင်တို့အဘို့မဟုတ်ပါဘူး! ကျနော်တို့ဥရောပရဲ့အထင်ကရက်ဘ်ဆိုက်များအချို့ကိုကြည့်ရှုရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုခေါင်မိုးပေါ်ကျန်ကြွင်းသောအရပ်သို့မဟုတ်ဖီးအပေါ်ရှမ်ပိန်ရင်းအားဖြင့်ဖြစ်တယ်ထင်. ဤတွင်ဥရောပရှိအကောင်းဆုံးခေါင်မိုးပေါ်ရှိစားသောက်ဆိုင်များနှင့်ကဖေးများအနက်အချို့ကိုသင်ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်.
ဥရောပအကောင်းဆုံးခေါင်မိုးပေါ်စားသောက်ဆိုင်များနှင့်ကဖေး: အတ္တလန္တိတ်စတား ဟော်တယ် - ရောမ, အီတလီ
ဘယ်အချိန်မှာအတွက် ရောမမြို့, Colosseum လိုမျိုးလှပပြီးရှေးဟောင်းနေရာတွေကိုကြည့်ဖို့လိုတယ် Trevi စမ်းရေတွင်း. သို့သော်သင်တို့သည်လည်းရန်ရှိသည် လှပသောမြင်ကွင်းကိုခံစားပျော်မွေ့ မြို့သူမြို့သား. နှင့်, အတ္တလန္တိတ်စတားဟိုတယ်များ၏ခေါင်မိုးပေါ်ဘားလာရောက်လည်ပတ်တဲ့အခါသင်နှစ်နိုင်ငံတစ်ဦးအမြင်ရှိ. ဒါကြောင့်ဒီဟာကဥရောပမှာအကောင်းဆုံးအိမ်ခေါင်မိုးစားသောက်ဆိုင်များနှင့်ကဖေးများထဲမှတစ်ခုလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်!
၏ချစ်စရာကောင်းတဲ့အမြင်များခံစားကြည့်ပါ ဗာတီကန်စီးတီး နှင့်ရောမမြို့တစ်ခုရှိခြင်းသည့်အခါ အိတ္စပရပ္ ဒါမှမဟုတ်တစ်ဖန် ဝိုင်. ဤနေရာတွင်ထက်တစ်ရက်ပိုမိုကောင်းမွန်အဆုံးသတ်ဖို့အများကြီး options များရှိပါသည်မဟုတ်!
ကနေအစာရှောင်ရထား လန်ဒန် ရောမမြို့ကိုလှည့်ပတ် 14 နာရီ, ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်အကွာအဝေးဖုံးအုပ် 1,434 ကီလိုမီတာ. ယင်းအပေါ်မကြာခဏန်ဆောင်မှုရှိပါတယ် ရထားလမ်းလမ်းကြောင်း လန်ဒန်နှင့်ရောမမြို့အကြား. ဒီခရီးစဉ်အတွက်ရထားများသောအားဖြင့်ပတ်ပတ်လည်ဘွတ်ကင်များအတွက်ဖွင့်လှစ် 12 လများ ကြိုတင်ပြီး. သင်၏ရက်စွဲများအတွက်ကြိုတင်စာရင်းသွင်းခြင်းကိုမဖွင့်သေးပါက London မှ Rome သို့ရထားဖြင့်ခရီးအတွက်အသက်သာဆုံးလက်မှတ်များကိုရရှိနိုင်သည့်နေ့တွင်အီးမေးလ်တစ်စောင်လက်ခံရရှိရန်ကြိုတင်ဘွတ်ကင်ကြိုတင်မှာကြားထားနိုင်သည်။. အသုံး တစ်ဦးကရထား Save အစာရှောင်ခြင်းနှင့်အလွယ်တကူအမိန့်ရန်!
ဥရောပအကောင်းဆုံးခေါင်မိုးပေါ်စားသောက်ဆိုင်များနှင့်ကဖေး: အဆိုပါ Cube ဘား - Galerie Lafayette - ပဲရစ်, ပြင်သစ်
အကောင်းဆုံးအမြင်များကိုလည်းတဦးအဘို့ ပဲရစ်, အဆိုပါ Galerie Lafayette ဌာနစတိုးဆိုင်၏ခေါင်မိုးပေါ်တက်ဦး. ခုနစျပါးကြမ်းပြင်အထိ, ဒီ 1500m ကျန်ကြွင်းပဲရစ်ကျော်တစ်ကယ့်ကိုအထင်ကြီး 360 °ရှုမြင်ကမ်းလှမ်း. အဆိုပါ Opera House အနီးကပ်အကွာအဝေး၌တည်ရှိ၏နှင့် Eiffel မျှော်စင်က၎င်း၏နောက်ခံဖြစ်ပါသည်. သို့သော်မသာအမြင်များနှင့် ပတ်သက်., သို့သော်ကျန်ကြွင်းသောနေရာသည် The Cube Bar ဟုခေါ်သောခေတ်မီ။ ချောမွေ့သောခေါင်မိုးပေါ်ရှိဘားတစ်ခုလည်းရှိသည်.
setting In-လေကြောင်းဖွင့်ပါနှင့်သဘာဝ, အရိပ်၌ကျန်ကြွင်းသောအရပ်သည်နေရောင်အတွက်နှစ်ဦးစလုံးစီးနင်းရန်ကမ်းလှမ်းမှုများနှင့်ပိုပြီးမိုးဒေသများ. အဆိုပါခေါင်မိုးပေါ် bar ထဲကနေ, သင်တစ်ဦးချမ်းအေးဘီယာအမိန့်နိုင်ပါတယ်, အချို့သော Parisian မုန်နှင့်အတူလန်းဆန်းကော့တေး. ၎င်းသည်ဥရောပရှိအကောင်းဆုံးခေါင်မိုးပေါ်ရှိစားသောက်ဆိုင်များနှင့်ကဖေးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်, ဒါကြောင့်တစ်ဦးထိုင်ခုံဖမ်းပြီးဖို့ကောင်းသောအချိန်အတွက်ဖြစ်!
ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့ကသူတို့ရဲ့ဥရောပအားလပ်ရက်အပေါ်အများအပြားခရီးသွားများအတွက်တစ်ဦးလူကြိုက်များ Starting Point သို့ဖြစ်ပါသည်. တစ်ဦးကရေတိုနှင့် အဆင်ပြေရထားစီးနင်း မေတ္တာတော်ကိုပြင်သစ်ရဲ့မြို့နှင့်အတူဗြိတိန်မြို့တော်ချိတ်ဆက်, ပဲရစ်.
ကနေတိုက်ရိုက် run နေတစ်ဦးတည်းသာရထားရှိပါတယ် ပဲရစ်မှလန်ဒန်: အဆိုပါ Eurostar မြန်နှုန်းမြင့်ရထား. ဒါကြောင့်နည်းနည်းပိုပြီးလွယ်ကူညာဘက်ရထားရွေးချယ်ရာတွင်စေသည်! မင်းသေချာပါစေ သင့်ရဲ့ရထားလက်မှတ်တွေဝယ်ယူရန် ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးကရထားသော်လည်းမှတဆင့်!
ဥရောပအကောင်းဆုံးခေါင်မိုးပေါ်စားသောက်ဆိုင်များနှင့်ကဖေး: Aria ဟိုတယ် High Note Sky Bar - ဘူဒါပတ်စ, ဟန်ဂေရီ
Aria ဟိုတယ်အမြင့်မှတ်စု Sky bar တွင် ဘူဒါပက် Buda နှင့်သီးနှံဖျက်ပိုးများအလွန်ကြီးစွာသော 360 ဒီဂရီအမြင်ကမ်းလှမ်း. ဒါဟာသီးနှံဖျက်ပိုး၏စိတ်နှလုံးမှာတည်ရှိသည်, ကွာစိန့်ကနေပဲကျောက်ခဲတပစ်. စတီဖင်ရဲ့ Basilica. ဤသည်အောင်မြင်ကျော်ကြားပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေစတိုင် bar ကိုတစ်ဦးအလွန်အားမစိုက်ရ Vibe ရှိပါတယ်, ထိုသို့ကသင်၏နှင့်အတူဘူဒါပက်ခံစားရန်ပြီးပြည့်စုံလမ်းဖွင့် မိသားစု နှင့်မိတ်ဆွေများ.
အဆိုပါ မီးရထား လန်ဒန်ကနေခရီး ဘူဒါပက် အန္တရာယ်ကင်းသည်, လွယ်ကူပြီးစျေးနှုန်းသက်သာ ပဲကြာ 24 နာရီ, Eurostar နေဖြင့်ပဲရစ်မြို့နှင့်မြန်နှုန်းမြင့် TGV မှပဲရစ်မြို့ကနေမြူးနစ်မှ, ထို့နောက်နေ့ချင်းညချင်းအိပ်ပျော်နေသော ဘူဒါပက်. သို့မဟုတ်ပဲရစ်ကနေတဆင့်ဆက်သွယ်မှုရှိပါတယ်နှင့် မြူးနစ်, သို့မဟုတ်ဘရပ်ဆဲလ်ကနေတဆင့်, Cologne & ဗီယင်နာ.
ဥရောပအကောင်းဆုံးခေါင်မိုးပေါ်စားသောက်ဆိုင်များနှင့်ကဖေး – ဘာစီလိုနာ
1881 SAGARDI နှုန်းသည်စားသောက်ဆိုင်ဖြစ်သည် Catalonia ၏သမိုင်းပြတိုက်, မွို့၌တစ်မူထူးခြားသောအာကာသဘာစီလိုနာ၏ဆိပ်ကမ်းအပေါ်စီးနှင့်မြေထဲပင်လယ်မှလုံးဝဆက်ကပ်အပ်နှံ အစားအစာ, ပင်လယ်ကနေပြည်. ဤ အတှေ့အကွုံ အိန္ဒိယ၏ Terrace ခုနှစ်တွင်ပြီးစီးဖြစ်ပါတယ်, ဘာစီလိုနာ၏ဆိပ်ကမ်းအားအပေါ်စီးမှခေတ်ပြိုင်ကျန်ကြွင်းကော့တေးဘား.
မှသွားလာရန်လွယ်ကူဒါဟာင် ဗြိတိန်နိုင်ငံ သို့ ရထားစပိန်. ပေါင် ၄၄ ကနေ ၅၈ ပြန်ရပြီးမှ ၂ နာရီ ၂၀ မှာ Eurostar ကိုပဲရစ်သို့ထွက်ခွာသည်, Gare de Lyon ရှိ Train Bleu စားသောက်ဆိုင်တွင်နေ့လည်စာစားသည်, ထို့နောက်နေ့လည်ခင်းကို double- ကုန်းပတ် TGV ဒျူပလက်စ Figueres ရန် (အတွက် ဆာဗေးဒေါ Dali ပြတိုက်), Girona & € 39 တစ်ခုချင်းစီကိုလမ်းမှဘာစီလိုနာ. *ပြောင်းလဲမှုဘာသာရပ်စျေးနှုန်းများ.
သင့်ရဲ့အိတ်ထုပ်ပိုးနှင့်ဥရောပထဲမှာအကောင်းဆုံးခေါင်မိုးပေါ်စားသောက်ဆိုင်များနှင့်ကဖေးသွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့အဆင်သင့်? စို့ တစ်ဦးကရထား Save သငျသညျရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်ဘယ်မှာသင်ရတဲ့ဂရုစိုက်!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေ ဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးပေး, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/best-rooftop-restaurants-cafes-europe/- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml သငျတို့သ / nl သို့မဟုတ် / pl နှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများဖို့ / က de ပြောင်းလဲနိုင်သည်.
#BestCafes #အကောင်းဆုံး #အကောင်းဆုံးစားသောက်ဆိုင်များ #ကဖေး #ဟိုတယ် #ခေါင်မိုးပေါ် europetravel longtrainjourneys Tranride ရထားခရီးသွား